Zvekufambisa zviwanikwa: bhuku mahotera, tsvaga nendege, mota dzekurenda, ...
Izvi kuronga rwendo uye unoda rubatsiro?. Ipapo ino webhusaiti ndizvo chaizvo zvauri kutsvaga. Vhura wepamusiXNUMXc.com isu tine ruzivo rwakanakisisa pamusoro penzvimbo huru dzevashanyi munyika. Mazuva ese tinoburitsa zvinyorwa ne matipi ekufamba, kwausingakwanise kupotsa, iwo mahombekombe akanakisa, yakasarudzika hunhu, yakanakisa gastronomy uye nezvimwe zvakawanda.
Tinogona kukubatsira nerwendo rwako?
Zvakare kana urikugadzirira rwendo rwakachengeteka izvo unoda rubatsiro kubhuka mahotera, tichitsvaga nendege, tichihaya mota yekurenda,… uye zvese izvi pamutengo wakanakisa uye nezvivimbiso zvese zvemusika. Ko kana? Zvakanaka, pano tinogona kukubatsira iwe zvakare. Shandisa zvinotevera injini dzekutsvaga kuti utenge yakachipa pamutengo uye unongonetsekana nekunakidzwa nezororo rako.
Injini yakachipa yekutsvaga hotera
Pano iwe uchawana yakanakisa kupihwa hotera. Tsvaga uye gadzira yako hotera mune yakanakisa mamiriro, mumaminetsi mashoma uye nezvose zvivimbiso.
Imwe yemapoinzi akakosha kutsvaga hotera kwatinogona kugara nekuzorora pamazuva ezororo. Kune izvi, hapana chakafanana nekusarudza yakanakisa zvakachipa mahotera ayo anowanikwa pasi rese. Kunyangwe iwe uchifunga kuti rinogona kuve rakaoma basa, harizove rakaomarara neinjini yekutsvaga hotera. Nenzira iyi, isu tinongofanirwa kufunga nezvenzvimbo iyo yatinoda kurasika kwemazuva mashoma.
Kana tangove nezvakajeka, tinonyora mubhawa rekutsvaga. Mushure make, chasara ndechekusarudza pazuva nemwedzi zvatichazoshandisa kuzorora. Kuti uite izvi, unogona kuona kuti kalendari inoratidzwa sei. Nenzira iyi, zvichave zviri nyore kusarudza mazuva. Chekupedzisira, iwe unenge uine chete sarudzo yekusarudza huwandu hwevanhu.
Kana dzazadzwa, dzinozoonekwa iyo yakanakisa kupihwa uye kukwidziridzwa emahotera ari munzvimbo yakasarudzwa. Uye zvakare, iwe unogona kusarudza sarudzo sedzakanaka semahotera ese-anosanganisira kana iwo chete anokupa iwe mangwanani. Iye zvino iwe unongofanirwa kutarisa kana chiri chako chaunoda uye sarudza pakati pesarudzo dzakasiyana. Zvirokwazvo ese iwo achave kune ako kufarira!
Famba kwaunofamba tine ndege yako iwe pamutengo wakanakisa. Shandisa yedu yekutsvaga injini uye tora kubhururuka kwako uine zvizere zvivimbiso uye zvakachipa kwazvo.
Tsvaga nendege neRumbo
Tsvaga nendege neDreams
Tsvaga ndege n Skyscanner
Tsvaga ndege neAtrapalo
Tsvaga ndege neLiligo
Tsvaga nendege neLinminute
Kana isu takatosarudza nzvimbo yatiri kuzoshanyira, uye kunyangwe hotera kwatinogona kugara, tinofanirwa kutarisa kuwanikwa kwendege. Iwe haudi chero chimwe chinetso kupfuura icho chatichangotsanangudza kwauri. Pa peji rimwe chete, unogona kutsvaga injini yekutsvaga cheap flights. Chishandiso chine zvese kusarudza zvakanaka zvakanakira uye kuita kuti zviwanikwe kwauri.
Kune vanhu vazhinji vanofunga kuti chikamu chikuru chebhajeti chiri kuenda kwatiri parwendo. Sezvo isu tese tisina makuru makuru ebhajeti, isu tinofanirwa kusvina zvishoma. Ehezve, nekutenda kune yakanaka yekutsvaga injini, unogona kusarudza zvekubhururuka madhiri kwauri. Mitengo yakanakisa uye makambani anovapa anozoonekwa. Nenzira imwecheteyo, iyo Yekutanga inozoratidzwawo, pamwe nekuenda uye nemaawa enguva yekufanana. Nekudaro, kana iine chikero, ichanyatsoratidzwa. Kana uchinge wazadza muminda yakakumbirwa muinjini yekutsvaga, iwe unenge uine zvese zvivimbiso zvaunogona uye zvichizoguma nemitengo inoshamisa kwazvo.
Tsvaga mota yekurenda inonyatsoenderana nezvido zvako muguta rako rauri kuenda. Tine chikuru kupa dzimba dzekurenda kubva kumativi ese epasi uye nemitengo yakanakisa.
Kana iwe usiri kuda kutora mota yako, asi wozoda kuenda kune kwaunoenda uine hunyoro hwakazara, unogona zvakare kusarudza emota dzekurenda. Saka haufanire kubvunza iwe pachako uye uve nazvo kana iwe uchimhara, usakanganwa iyo yekuresa mota yekutsvaga injini.
Mariri unogona kuwana zvakanaka makambani ese mahombe. Uye zvakare, iwe paunoverenga online, iwe unogona kubatsirwa kubva kune makuru madhora. Chinhu chisingambokuvadza. Ehezve, imwe mukana wekubhuka mota yekuhaya ndeyekuti iwe unogona kubata kwako kuchengetera. Izvi ndezvekuti iwe unogona kushandura kana kana kuzvikanzura.
Matipi kana uchihaya mota
Pamusoro pekuve iri yakapusa nhanho, kuburikidza neinjini yekutsvaga, iwe unofanirwa kuziva izvo mota yega yega ine mutengo. Izvi zvichatsanangurwa zvizere pane yega yega mapeji iwe aunokwanisa kuwana. Izvo zvinogara zvichitsamira parudzi rwemotokari uye dzimwe nguva kunyangwe nzvimbo yatinoiroja. Ndokusaka iyo Renault Clío kana Citroen C1 kana C4 zviri zvimwe zvezvinhu zvakachipa. Ehezve, sezvatinokuudza, iwe unofanirwa kugara uchitarisa pane yega yega webhusaiti uye uverenge mamiriro acho mushe.
Bhuka pese paunogona kufanoita. Isu tinoziva kwazvo kuti mwaka wepamusoro mwaka unogara uchiita mitengo inodhura. Mamwe makambani anoda kuti mutyairi ave asingasviki makore makumi maviri nemashanu ekuberekwa, asi mamwe mawedzero anogona kuwedzerwa. Rangarira kuti iwe unogara uchifanira kusiya gasi tangi sezvatakariwana. Ndosaka, pazvinokwanisika, isu tichasarudza gwara rakavakirwa pane yakazara / yakazara tangi. Nenzira iyi tichadzivirira kushamisika uye tinokwanisa kuzadza peturu kwainotikodzera, chero bedzi tichiisiya yakazara.
Tora inishuwarenzi yekufamba
Kana iwe uchizoenda rwendo kunze kwenyika uye iwe uchida kudzivirira chero mhando ripi rezvinetso, zano rakakura kutora inishuwarenzi yekufamba. Wedu mupi IATI Inishuwarenzi inopa yakawandisa renji yeinishuwarenzi yekufamba kuti ienderane nezvaunoda. Uye zvakare, pakubvumirana neinishuwarenzi yako kuburikidza newebsite yedu uchafadzwa ne5% dhisikaundi zvine chekuita nemazinga akajairwa.
Maitiro ekubata inishuwarenzi akapusa, iwe unongofanirwa ku:
Pinda webhusaiti yeinishuwarenzi nekudzvanya apa.
Ratidza kwaunogara, kwaunoenda kwauri kuenda nemisi yacho
Dzvanya pane bhatani «Verenga bhajeti» uye iwe waita
Panguva ino chishandiso chinokupa iyo rese katarogu yezvigadzirwa iyo yainowanikwa kune ako marwendo nemitengo yakanakisa. Sarudza iyo inonyatsoenderana nezvido zvako uye zadza ruzivo rwako kuti uhaye iyo uye Wakatogadzirira KUSHAYA INShuwarenzi.
Dzvanya apa kubhuka yako inishuwarenzi yekufamba ne5% dhisikaundi
Nzvimbo dzinogamuchira vashanyi vakawanda gore rega rega
Imwe yenzvimbo dzinozivikanwa dzevashanyi iFrance. Zviri mukati nzvimbo yekutanga, maererano neongororo yakaburitswa. Mairi zvinonzi vanhu vanosvika mamirioni makumi masere nemashanu vakasarudza nzvimbo ino uyezve, zvinofanirwa kutaurwa kuti haisi yepasi. Kune zvakawanda zvinokwezva izvo France zvine. Vashanyi vanosarudza iyo Eiffel Tower seimwe yeanofanirwa-kuona anomira. Vamwe vanotsunga kukwira, nepo vamwe vachifungisisa kubva kunze uye kunyanya pakuvira kwezuva.
Kunyangwe mitsara mirefu, iyo Louvre zvakare inofanirwa. Chinhu chatinofanirawo kutaura pamusoro peName Dame Cathedral. Zvakare haufanire kukanganwa kushanyira imwe yenzvimbo dzinonyanya kudanana, kunyangwe munzvimbo ino mumwe nemumwe aine mabrashrush aya. Mont Saint Michel, yakavharidzirwa ine chechi inofanirwa kuonekwa kuti ifungisise kunaka kwayo chaiko. Iyo Arc de Triomphe, iyo Basilica yeMweya Mutsvene uye nekudaro ndinogona kunge ndichinyora nzvimbo dzaunofanirwa kuona, zvirinani, kamwe chete muhupenyu hwako.
Imwe yenzvimbo dzine vashanyi vazhinji, uye iyo yakamiswa mushure meFrance, iUnited States. Mukati mavo, kune dzimwe nzvimbo dzakazara kupfuura dzimwe. Ehezve, iye mushanyi anazvo zvakajeka.
Times Square: Chikwere chakakurumbira chiri muNew York chinoona vanopfuura mamirioni makumi mana evashanyi vachipfuura gore rega rega. Ingori neayo makuru ekuona akazara nemwenje, inoita kuti ive yekumanikidza kumira.
Central Park: Mumoyo weManhattan, tinowana paki huru iyi, iyo yatakatomboona mumafirimu mazhinji. Vanenge mamirioni makumi matatu nemashanu evashanyi vanouya gore rega rega kuzoona runako uye kukura.
Las Vegas: Ndiani asina kumborota nezvekuroora muLas Vegas? Pasina kupokana, imwe yenzvimbo dzinoyemurwa kwazvo. Kwete chete nekuda kwechinangwa ichi, asi kumakasino, mitambo yemashiripiti kana kugona kushanyira Grand Canyon.
Boston: Iri iguta rine nhaka yakakura mutsika. Uye zvakare, isu hatikanganwe iyo yekudyira yeCheers uye yayo huru gastronomic kupihwa.
San Francisco: Rimwe remaguta akashanyirwa muUnited States. Iyo ine mukana wakakura kune zvese zvainotipa, sezvo isu tisingazofaniri kufamba kure kuti tione zvese zvatinoda.
Los Ángeles: Hatina kukwanisa kukanganwa Los Angeles. Makomo, zvinokwezva vashanyi uye humbozha hwainazvo hunofanirwa.
Spain iri mukati nzvimbo yechitatu yeavo vanoshanyirwa nevashanyi. Mukati meizvi, isu tine nzvimbo dzekufarira kwese. Zvichida, vashanyi vanosarudza iyo Mosque yeCórdoba, iyo Alhambra muGranada neLa Sagrada Familia muBarcelona, ​​senzvimbo dzinokwirisa fungidziro dzese. Seville neReales Alcázares ayo haasi zvakare kumashure kwekushanya kwakanyanya. Kuenda kuchamhembe, iyo Cathedral yeSantiago de Compostela ndiyo poindi yemusangano yevafambi nevadi vehunyanzvi. Iyo Aqueduct yeSegovia kana iyo Cathedral yeBurgos inoonekwa senzvimbo zhinji dzevashanyi.